Komishanka Doorashooyinka ka warramay socdaal ay ka soo laabteen | Somaliland.Org
Komishanka Doorashooyinka ka warramay socdaal ay ka soo laabteen
November 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Komishanka Doorashooyinka Somaliland ayaa maanta sheegay inay heshiis cusub la saxeexdeen Shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska oo ay qandaraas ku siiyeen kala-shaandhaynta Isdiiwaangeliyayaasha Cod-bixiyayaasha Doorashada.
Komishanka oo shalay socdaal qaatay muddo siddeed maalmood ah oo ay ugu maqnaayeen dalka Itoobiya ka soo laabtay, ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu ahaa ka-qayb-galka tababar la xidhiidha arrimaha Doorashada, ayaa sheegay in intii ay ku sugnaayeen dalka Itoobiya ay la kulmeen Qaadhaan-bixiyayaasha, isla markaana ka wada hadleen arrimaha Doorashada iyo sida ugu habboon ee kala shaandhaynta Diiwaangelinta. Waxaanay sheegeen in ay halkaa kula kulmeen Hay’ad laga leeyahay Ingiriiska oo ay heshiis kula galeen kala shaandhaynta Serverka. “Shirkaddan aanu heshiiska la saxeexanay oo lagu magacaabo Electrol Reform Services International hore ayaanu u aragnay Cv-gooda. Waxaananu heshiis kula galnay kala shaandhaynta Serverka.” Sidaa waxa yidhi Afhayeenka Guddida Doorashada Maxamed Axmed Xirsi oo ka hadlay Shir-jaraa’id oo ay guddidu qabteen.
Afhayeenku wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ay dalka u iman doonaan Khuburada ay Shirkaddani soo dirayso eek ala shaandhaynta Server-ku. Isla markaana ay eegi doonaan sida ugu habboon ee oo geli karo habaynteeda.
Waxa kale oo uu Afhayeenku sheegay in Shirkaddani ay ka madax-bannaanaan doonto farogelin ka timaadda Axsaabta iyo Xukuumadda. Taa bedelkeedana ay Komishanka u shaqaynayaan, wada-shaqayntuna ay ka dhaxayso Komishanka oo kaliya.